Apple iid Music (iid Music Lugood) London 2015
Apple Music festival waa damaashaad in dabaal music iyo waa nooc ka mid ah riwaayad music ah kaas oo ay maalgelinayana Apple Inc. Bandhigu wuxuu markii ugu horeysay lagu qabtay sanadkii 2007 oo tan iyo markaas waxa ay ahayd xaflad sanadle ah. Iidda Tani ee London lagu qaban doono sanadkan iyo faafin lahaa ka September 19 ilaa September 28 tikidhada Free in dhacdadan ayaa la siiyaa Apple Music, taageerayaasha YPlan iyo Lugood iyo dadka isticmaala ku nool UK dhex abaalmarinta barbaro. Waxa ugu fiican oo ku saabsan iidan waa in aan kaliya ku koobnayn dhagaystayaasha live laakiin waxaa sidoo kale la heli karo iyo barta internetka u arkaysid ka dib on lacag la'aan ah oo ah qiimaha muddo kooban oo waqti Apple TV, Lugood iyo Apple Music.
Sannadkan, iidda la qaadan doonaan meel at Roundhouse iyo fanaaniinta iyo guutooyinkiisa oo badan oo heer sarre waa laga fulinaya doonaan. Qaar ka mid ah fanaaniinta, kuwaas oo la fulinaya doono waxaa ka mid ah One Direction, Pharrell Williams, Machine iyo kuwo kale oo badan. Dhacdadani waxa ay sare ee ma ahan oo keliya ee London laakiin guud ahaan adduunka, waxaana la filayaa in uu noqdo meel taageerayaal ayaa la falgala iyo dhagaysan fanaaniinta ay jecel yihiin.
Sidee loo helaa Lugood Music tigidhada iidda?
Sida ugu dhakhsaha badan u damaashaad Apple Music waxaa ku dhawaaqay sanad kasta, taageerayaasha bilaabi raadinaya siyaabo aad u heli lahayd helaan tikidhada sidoo kale lacag la'aan ah ama lacagta jaban ee suuragalka ah. Tani waa iid Lugood sanadlaha sagaalaad iyo sida sano, xitaa sanadkan tigidhada waxaa ay ku koobnaanayaan iyo tirada dadka iyaga oo raba waa heer sare ah. Sidaas darteed haddii aad rabto inaad hesho tigidhada iid Lugood Music, waxaad raaci kartaa hoos tallaabooyinka.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo si ay u helaan tikidhada ee iidda music Apple yahay si ay u helaan Apple Music page iid midkood iyada oo aad iPhone, PC, Mac, iPad ag maraya in Lugood.
Hadda oo aad on page oo ka mid ah app Apple Music, waxaad isticmaali kartaa iyada oo ay helaan dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay oo ku saabsan iid Apple Music. Qaar ka mid ah xubnihii macluumaad ah oo aad ka heli kartaa marka aad booqato this page ka mid ah line-ka mid ah fanaaniinta iyo qaab, ka dambeeya content weraro, music la xiriira iyo tab ah oo lagu magacaabo 'tigidhada Win'.
Marka aad goobjooga u ah tab "Win Tigidhada ', markaas waxaad u baahan tahay riix it on. On sidaas samaynaya, waxaad la qaadi doonaa si page ka meesha aad u baahan doontaa in ay doortaan taariikhaha aad jeclaan lahayd in aad dalbato tigidhada. Waxa kale oo aad codsan kartaa taariikhaha badan.
Ka dib markii xulashada taariikhaha, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo ka dibna aad u soo gudbiso galo ama codsiga. Apple doorto guuleysatay tigidh si nasiib ah oo markaas iyaga la socodsiinayaa ka hor dhacdada ku saabsan tahay in ay bilaabato.
Haddii aad wargelinta email aad ka heli Apple, waxaad yeelan doontaa 72 saacadood oo ku saabsan in aad meel xaqiijin. Haddii aad soo daahdo, markaas Apple lumiyo tigidhada aad.
Haddii codsigaaga ma aha guul, ka dibna aad had iyo jeer waxay fursad u ah daawashada riwaayadaha ku noolaan via Apple Music ama Lugood. Haddii aad raacdo qaab aad jeceshahay on Twitter ka dibna sida fiican ee aad ku guuleysan karto tigidhada Concert dhex tartamada kala duwan. Tartamada oo waxaa la qaban doonaa ka dib markii fal kasta oo aad noqon kartaa qof nasiib badan haddii aad si taxadar leh u daawato abaalgudka isla daqiiqadii ugu dambeysay.
Xusuusnow in tikidhada waxaa la dalban karaa ilaa afar maalmood ka hor kasta oo ka mid xaflado iyo sidaa darteed waxaa weli way ku filan tahay inaad jartaan idinkaa iska leh. Horaantii, Apple ayaa waxaa soo gaadhay dab loogu kala carar barnaamijka ay tigidhada laakiin waxa ay u muuqataa in dhibaatada haatan lagu xalin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal caqabad weyn iyo in ay tahay in Apple Music waa kaliya la jaan qaada qoraalkii ugu dambeeyey ee Lugood iyo app Music ah. Haddii aad la kulmi nooc kasta oo dhibaato leh furitaanka bogga iid Music ah, markaas waxaa wanaagsan in lagu hubiyo updates Lugood iyo casriyeeyo qaybtii ugu danbeysey.
Wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad ka eegi kartaa website-ka: https://www.applemusicfestival.com/
Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo u Lugood Music Festival London 2015
Halkee noqon doonaa xaflado uu ka dhacayo sanadkan ee Lugood Music Festival?
Roundhouse, Chalk Farm Road, London, NW1 8EH.
Sidee baan ku heli karaa tikidhada u iid Lugood Music?
Maxaa yeelay, dadka degan UK, tigidhada waa lacag la'aan iyo in lagu guuleystay karaa iyadoo la booqanayo https://www.applemusic.com/festival . Qaar kalena, xaflado la raaxaysan karaa lacag la'aan muddo kooban oo waqti TV Apple ama Apple Music.
Waa maxay waqtiga ugu danbeeyay ee aan imaan karaa Roundhouse?
Albaabada dhow 8 pm iyo kuwa soo daahay laga yaabaa inaan la damaanad qaaday galo.
Waa maxay waqtiga furitaanka Roundhouse ah?
waqtiyada furitaanka waa 6pm.
Maxay yihiin waqtiyada ka mid ah waxqabadka oo ka mid ah fanaaniinta furitaanka?
artist furitaanka wuxuu bilaabi doonaa fulinaya masraxa at 7:45 pm ku saabsan.
Maxay yihiin waqtiyada ka mid ah waxqabadka headliner ah?
Wakhtiga headliner ku tegi doono masraxa waa 9 pm.
Waa maxay wakhtiga waa ay muujinayso la filayaa in ay ku dhameysan?
qaab ayaa la filayaa in ay soo afjarto qiyaastii 10.30 pm.
Waa maxay waqtiga ku dhow ee goobta?
About 11 pm habeen kasta.
Martidu ka dib imaan karaa aniga ahayn?
Ma cuntooyinka iyo cabitaanada la oggol yahay?
Maya, ma keeni kartaa in aad cunto u gaar ah ama cabitaan. Fursado badan oo la mid ah la siin doono garoonkaas.
Waxaan ka iibin karaa tigidh qof ama ka iibsadaan qof kale tigidh?
No. tikidhada waxaa loogu talogalay in ay gabi ahaanba bilaash ah oo ah qiimaha iyo in aan la iibin karaa, bixiyey iibka, wareejin ama kaga baayacmushtari jireen. Iyagu ma loo isticmaali karaa abaalmarinta ah qof kasta marka laga reebo qabanqaabiyeyaasha dhacdo. Kuwii isku daya in ay iska iibiso ama tikidhada looma oggolaanayo inay sabab ah. Dhammaan ticketholders waa la iman IDs sawir ay.
Sidee waa da'da ugu yar in ay ka qayb iid music ah?
da'da ugu yar in ay galaan iid music waa 14 sano jir ama la soconaya qof weyn.
Ma goobaha wax lagu siiyo dadka naafada ah?
Haddii aad raadineyso caawimo dadka naafada ah ama helitaanka, waxaad email u diri kartaa at access@roundhouse.org.uk inay u wargaliyaan Roundhouse.
Ma jiraa cloakroom ah garoonkaas?
Ma jiraan wax ATM garoonkaas?
Roundhouse diidi karaa oggolaanshaha ama heli karo qof kasta?
Haa, Roundhouse ee heysta xaq u leedahay inaad diido gelitaanka ama weydii qofka in uu ka tago haddii isagu / iyadu u dhaqmo si aan habooneyn ama khatar ah.
Maxaan sameeyaa in ay dhacdo luma alaabtaada?
Roundhouse heysta wax masuuliyad ah luminta alaabtaada. Si kastaba ha ahaatee, ku soo wargelin kartaa shaqaalaha Roundhouse haddii aad wax lumin si ay kuu caawin kara hab hadba ay awoodaan.
Haddii aanan ku noolayn UK, waxaan ku guuleysan karaan tikidhada?
No. Tartamada Ticket yihiin oo kaliya u furan tahay dadka degan UK ay sabab u tahay xayiraad sharci gaar ah.
Waa maxay xadka ay tirada ku nool ayaa muujinaya mid ka codsan kartaa tigidhada?
-galooti kasta ku guuleysan karaan labada ciyaaryahan ee tikidhada per riwaayad ka mid ah oo keliya iyo ku guuleysan karto wax ka badan shan nooc oo tikidhada ee guud ahaan ee iidda Lugood Music.
Waxaan ayaa dhameystirtay codsigeyga inuu ku guuleysto tikidhada, waxa ku xiga ee dhacaya?
Ka dib marka aad codsato tigidhada iidda, waxaad ka heli doontaa email xaqiijin laga Apple ah. Waxaa lagu wargelin doonaa in aad qabto ama aad ku guuleysan tigidhada. Haddii aadan ku guulaysan, markaa waxaad u baahan doontaa 72 saacadood si loo xaqiijiyo tigidhada aad.
Aan ku guuleysto tikidhada u iid Apple Music laakiin ku guul darreysatay inay xaqiijin hor inta uusan xirmin 72-ka saac ee. Hadda waxaan wax samayn kartid?
No. Tikidhada waxaa laga xaaraamayn doonaa kiiskan.
Haddii aan ka qayb gali karaan show ee qofka, bal sidee baan u daawan kartaa?
Waxa aad ka daawan kartaa bandhigyada labada nool ama ka dib on muddo kooban oo waqti iyo waxa la qaban karaa via Apple Music on your iPhone, iPad, iPod Touch, ama computer. Waxaad kaloo isticmaali kartaa Apple TV ama AirPlay.
Halkaas ayey joogi doonaan xarunta mid ka mid ah maqal iyo muuqaal ah cajalado ah riwaayad ama qaab?
Haa. By dhigata iidan, aad ogolaato inaad xaqiiqda ah in audio iyo film laga duubay qaab loo isticmaali karo ujeedo ganacsi ku salaysan boqortooyada la'aan ah, mid caalami ah.
Maxaa dhacaya haddii show ah uu kansalay?
Waxaa lagugu soo wargelinayaa sida ugu dhaqsaha badan haddii show ah uu la baajiyay. Si kastaba ha ahaatee, show uusan sheegin xilliga ay dhacdo in wax kasta oo. Sidoo kale, tigidhada aad ma awoodi doonaan in wareejiyo habeen kasta oo kale.
Waa maxay version software loo baahan yahay si uu u daawado qaab?
Si aad u daawato show ama qaab, waa in aad leedahay macruufka 8.4 ama ka dib, Lugood 12.2 ama ka dib, ama Apple TV (labaad ama jiilka saddexaad) la version software 6.0.2 ama ka dib.
Halkee ayaan ka jawaabo in ka badan oo su'aalo aan ka heli kartaa
Haddii aadan awoodin in aad ka heli jawaabta aad raadinayso on this page, waxaad samayn kartaa emailhelp@applemusicfestival.com.
YouTube Downloader Online Mp3 Free iyo Alternative
> Resource > Music > iid Apple Music (iid Lugood Music) London 2015